Suuqii Xerada Qoxootiga Dhagaxlay oo Gubtay. | ogaden24
Suuqii Xerada Qoxootiga Dhagaxlay oo Gubtay.
Dab xoogan ayaa siqdii dhexe ee habeenimadii xalay kakacay suuqa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab. Dabka oo aad u baaxad waynaa ayaa gubay qayb wayn oo kamid ah suuqa xerada Dhagaxlay.
Dabka ayaa baabi’iyay dukaamo iyo bakhaaro ay alaab kala duwan taalay sidoo kale wuxuu dabku gaystay baro kac xoogan oo qaybihii kale ee suuqa ah, wuxuuna dabku khalkhal galiyay bulshada xerada Dhagaxlay.
Lama oga sababta keentay dabkan, wuxuuna dabku kakacay goob aan maqaaxi ahayn isla markaana aan lafilaynin in uu dab kakici doono, taas oo dukaamo raashinka lagu iibiyo ah.
Dadka shacabka ah oo kaashanaya Ilaahay ayaa dabkii xakameeyay waxaana daminta dabka kaqayb qaatay dabdamis ay leedaha hay’ada laanqayrta cas ee Kenya, waxaana ugu dambaystii lagu guulaystay in dabkii laxakameeyo.
Ma aha markii ugu horaysay ee uu gubto suuqa xerada Dhagaxlay, sanadkii 2012 ayay ahayd markii uu gubtay guud ahaanba suuqa dhagaxlay iyadoo ay jiraan dhowr jeer oo kale oo qaybo kamid ah suuqa ay gubteen.